राजीनामा फिर्ता गर्न भीम रावलले माधव नेपालसँग राखेको त्यो शर्त, पूरा होला ? - Media Dabali
राजीनामा फिर्ता गर्न भीम रावलले माधव नेपालसँग राखेको त्यो शर्त, पूरा होला ?
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा देखिएको विवादसँगै असन्तुष्ट बनेर राजीनामा दिएका उपाध्यक्ष भीम रावललाई भेट्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल उनकै निवास टोखा पुगे । त्यहाँ दुवै नेताबीच छलफल भयो ।
छलफलका क्रममा नेता नेपालले उपाध्यक्ष रावलले सांसद पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता गर्न आग्रह गरे । तर नेता रावलले यथास्थितिमा राजीनामा फिर्ता नहुने जवाफ दिए ।
नेता राललले आफू नेतृत्वको एकता कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति पत्रको स्वामित्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपालले नलिइदिँदा सांसद पदबाट राजीनामा गरेको जवाफ नेपाललाई दिए ।
हिजो बुधवार साँझ नेता नेपाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश शाहसहित १४ जना सांसदसँग आफ्नै निवास टोखामा भएको भेटवार्तामा रावलले राजीनामाको कारण पार्टीको विवाद रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शाहका अनुसार भेटमा नेपालले रावललाई राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै भने, ‘मेरो चाहना पनि सबै समस्याविरुद्ध एकसाथ लडौं भन्ने नै छ । साथीहरूको चाहना पनि तपाईंले राजीनामा फिर्ता लिनुहोस् भन्ने छ । राजीनामा फिर्ता गरिदिनुस् ।’
उपाध्यक्ष रावलले आफूलाई एकताका लागि सक्रिय बनाएर दुबै पक्षका शीर्ष नेताहरूले सहमतिको स्वामित्व नलिएकोमा चित्त दुखेको जवाफ दिए । १० बुँदे सहमतिपछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बेला नेकपा एमाले विभाजित बनेको थियो ।
उपाध्यक्ष रावलले जवाफ दिए, ‘मैले एकताका लागि इमान्दारीपूर्वक भूमिका खेलें । यसमा पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता लगायत सबैले धन्यवाद दिनुपर्नेमा इमान्दारीपूर्वक स्वामित्व समेत लिने काम भएन । यसमा मेरो चित्त दुख्यो ।’
नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सांसदको बुधबार भएको भेलामा रावल सहभागी नभएपछि नेता नेपाल उनकै निवासमा पुगेका थिए । राजीनामा दिएर उपाध्यक्ष रावलले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका थिए । रावलले राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिमका मन्त्री र सांसदको टोली काठमाडौं आएर रावललाई भेटेपछि माधव नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेको थियो । कोटेश्वरमा सुदूरपश्चिमका नेताहरूले भीम रावलसँग छलफल गर्न नेता नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष रावलसँगको भेटमा नेपालले भने, ‘पार्टी आन्दोलनका विषयमा एकैठाउँ बसेर सल्लाह गरौंला । अहिले राजीनामा फिर्ता लिनुहोस् । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईं हामी सबैलाई माया गर्नेको तर्फबाट हो भन्ने सम्झिदिनुहोस् ।’
जवाफमा उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘मैले एकताका लागि पहल गरें । तपाईंले धन्यवाद दिनुपर्थ्यो । मलाई एकताका लागि भनेर पठाउने र उता एकता भाँड्ने काम भए । मलाई दुःख लाग्यो । एकतामा सक्रिय भएको मान्छेले विश्वासको मत कसरी दिने ?’
सांसद कायमै रहँदा तटस्थ समेत बस्न नहुने मान्यता अनुसार आफूले राजीनामा दिएको उपाध्यक्ष रावलले स्पष्ट पारे । ‘मतदान नगरेर तटस्थ बस्ने राजनीतिको कुनै मत हुँदैन । कि त मतदान गर्ने कि अस्वीकार गर्ने हो । तटस्थ मित्रहरूबीच गरिने राजनीति होइन,’ रावलले भने ।
उपाध्यक्ष रावलले राजीनामा फिर्ताका लागि १० बुँदे सहमतिलाई ओली र नेपालले ग्रहण गर्नुपर्ने, पार्टीमा सहमति गर्न सहमत हुनुपर्ने र पार्टी एकता हुनुपर्ने शर्त राखेका छन् । रावलले भने, ‘तपाईंहरू जस्तो शुभचिन्तक, सहयोद्धा र नेता कार्यकर्ताले आग्रह गर्नभएको छ । म यसबारे विचार गर्छु ।’
पार्टी एकताका लागि रावलले राखेको शर्तजस्तै बुधबारको नेपाल पक्षका भेलाले समेत पार्टी एकतामा जोड दिने निर्णय गरेको छ भने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन सकिने धारणा राखेका छन् । एमालेमा एकताको विषय गम्भीरताका साथ उठिरहेकाले उपाध्यक्ष रावलको राजीनामा फिर्ता हुने सम्भावना देखिएको छ ।